Lioka 7:1–17 "1 Ary rehefa vitan’i Jesosy teo anatrehan’ny olona izany
toriteniny rehetra izany, dia nankany Kapernaomy Izy. 2 Ary ny mpanompon’ny
kapiteny anankiray, izay malalany, dia narary efa ho faty. 3 Koa raha nahare ny amin’i Jesosy ilay kapiteny, dia naniraka loholon’ny Jiosy hankeo aminy hangataka Azy mba ho avy ka hahasitrana ny mpanompony. 4 Ary rehefa tonga teo amin’i Jesosy ireo, dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe: Miendrika ny hanaovanao izany izy, 5 satria tia ny firenentsika izy, sady izy no efa nanao ny synagoga ho antsika. 6 Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary rehefa efa mby teo akaikin’ny trano Izy, ilay kapiteny dia naniraka sakaiza hitsena Azy ka nanao taminy hoe: Tompoko, aza manahirana ny tenanao Hianao; fa tsy miendrika hidiranao ao ambanin’ny tafon-tranoko aho. 7 Koa na dia ny tenako aza dia nataoko fa tsy miendrika hankeo aminao; fa mitenena ihany, dia ho sitrana ny ankizilahiko. 8 Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany, ka manana miaramila izay feheziko; koa hoy izaho min’ny anankiray: Mandehana, dia mandeha izy, ary amin’ny anankiray koa Avia, dia avy izy, ary amin’ny mpanompoko: Ataovy izao, dia manao izy. 9 Ary nony nahare izany Jesosy, dia gaga taminy; ary dia nitodika Izy ka nanao tamin’ny vahoaka izay nanaraka Azy hoe: Lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany Aho, na dia tamin’ny Isiraely aza. 10 Ary nony tafaverina tao an-trano ireo iraka ireo, dia hitany fa sitrana ilay mpanompo. 11 Ary taoriana kelin’izany Jesosy dia nankany an-tanàna atao hoe Naina; ary nanaraka Azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. 12 Ary rehefa mby teo akaikin’ ny vavahadin’ny tanàna Izy, dia, indro, nisy fatin’ny lehilahy anankiray nentina nivoaka, izay zanakalahy tokan’ny reniny, sady mpitondratena ravehivavy; ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy. 13 Ary nony nahita an-dravehivavy ny Tompo, dia onena azy ka nanao taminy hoe: Aza mitomany. 14 Ary nanatona Izy ka nanendry ny tranovorona, dia nijanona izay nilanja. Ary hoy Jesosy: zatovo, hoy Izaho amina: Miarena. 15 Dia niarina ny maty sady niteny, ary dia natolony tamin-dreniny. 16 Ary raiki-tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an’Andriamanitra hoe: Mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika; ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olony. 17 Dia niely teny Jodia rehetra sy teny amin’ny tany manodidina rehetra ny lazan’i Jesosy ny amin’izany zavatra izany."
Kapernaomy. Tanàna any amin’ny 145 km miala avy ao Jerosalema izy ity. Raha
vao tonga tany i Jesosy dia nandre zava-mahagaga Azy tanteraka. Inona izany? Finoana! Finoan’ny olona iray, olona manana ny maha izy azy, hoy ny fitenintsika, satria manam-boninahitra, kapiteny teo amin’ny laharana maha miaramila azy. Nanana mpanompo izy izay narary efa ho faty (2). Ny fandrenesany an’i Jesosy tonga tao an-tanànany no nanaitra azy ka nampanirahany olona hilaza aminy mba hanasitrana ity mpanompony. Dia avy tokoa i Jesosy. Saingy inona no nitranga? Tsy navelan’ity kapiteny hiantrano ao aminy akory i Jesosy fa nasainy niteny fotsiny mba ho sitrana ilay mpanompony. Izany no nahatalanjona an’i Jesosy ka nahaloa-bolana Azy hoe: ”Tsy mbola nahita finoana tahaka izany Aho na dia tamin’ny Isiraely aza” (9b) Naina. Tanàna kely iray eo ambanimbanin’i Kapernaomy izy ity. Ny zavatra hitan’i Jesosy tao indray dia faty efa ao anaty vata nentina nivoaka ny trano handeha halevina narahin’ny olona marobe (12b). Fa Jesosy kosa raha nahita izany dia onena ilay reny satria, sady mpitondratena izy no tsy nanana afa-tsy io zanany lahy izay maty io. Nikasika ny vata Izy ka nampijanona izay nilanja ary nanangana ilay tovolahy tamin’ny maty (14b). Nidera An’Andriamanitra ny olona. Nahita izany asa mahagaga nataon’i Jesosy izany ireto olona marobe ka velom-piderana sy fisaorana an’Andriamanitra. Mbola mitohy hatramin’izao androntsika izao ny asa mahagaga ataon’i Jesosy. Inoana fa mahatsapa izany isan’andro ianao.